Gawaarida Imtarolu ee Imtarolu Mark labaad: 'Xalka asalka ahi waa metro' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulGawaarida Tijaabada ah ee Imamoğlu Imtaxaanka Marki Labaad: 'Xalka asalka ahi waa metro'
03 / 01 / 2020 34 Istanbul, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Gobolka Marmara, Metrobus, TURKEY
imamoglu asil cozum metro oo tijaabinaysa aaladda cusub ee metrobus markii labaad
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu, waa markii labaad oo lagu daro diyaaradaha dagaalka ee BRT, wuxuu baaray gaariga cusub. TUYAP joogsigii ugu dambeeyay, Yenamosna'ya İmamoğlu oo ku safraya gaariga imtixaanka, ayaa uga jawaabay su'aalaha saxafiyiinta koorsada ku jira. Imamoğlu wuxuu hoosta ka xariiqay inay ku dhaqmi doonaan si caqli gal ah xagga iibsiga gawaarida oo ay go'aan ka gaaraan isaga, uz Waxaan maanta xallinaynaa, laakiin dhinaca aan ku fikirnaa 3 sano, 5 sano iyo 10 sano ka dib. Khadkan, waxaan ku heli doonnaa xalal anagoo dadka isku keenaya marinka dhulka hoostiisa intii suurto gal ah. Laakiin khadkaani wuxuu sii wadi doonaa ilaa inta loo baahan yahay. Waxaan ka warqabnaa in ku shaqeynta sayniska oo aan ku jirin shaydaannimo ay u roon tahay labada muwaadin iyo Istanbul. ”
Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Metropolitan Municipal (IMM), ayaa tijaabiyay bas cusub oo jiil cusub ah Noofambar 19, 2019 si loogu daro diyaaradda metrobus. Imamoglu ayaa ka qaybqaatay tijaabadii labaad ee saaka. Beylikdüzü TÜYAP Metrobüs joogsigii ugu dambeeyay, İmamoğlu wuxuu saaran yahay gaariga, Xoghayaha IMM Yavuz Erkut, Kuxigeenka Xoghayaha Guud ee u xilsaaran gaadiidka Orham Demir, Lataliyihii Murat Ongun, Gudoomiyaha Agaasimaha Guud ee IETT Alper Kolukısa iyo Otobüs A.Ş. Maareeyaha guud Cali Evren Özsoy ayaa la socday. Helitaanka macluumaad faahfaahsan oo ka imanaya saraakiisha shirkadda ee ku saabsan gaadhiga Imamoglu, oo laga helay baska isagoo socda. Imamoglu, oo ka soo safray TÜYAP kuna sii jeeday Yenibosna, ayaa ka jawaabay su’aalaha saxafiyiin ku sugan gaari tijaabo ah. Su’aalaha uu weydiiyay Imamoglu iyo jawaabihii uu siiyay Madaxweynaha IMM waxay ahaayeen sida soo socota:
Waxaan u baahanahay inaan sameyno ka hortag muuqaal ah oo aad ugu dhow dartiis ”
Mi Imtixaannada ma sii socon doonaan? Goormaan arki doonnaa metrobuse-ka diyaaradaha?
Iibsiga basaska ee magaalooyinka noocan ahi waa tiro aad u tiro badan, oo aan ahayn basas dhawr ah. Gaar ahaan khadka BRT wuxuu marayaa heer aad u sareeya marka loo eego waxqabadka; heerka gaadiidka rakaabka waa mid aad u sarreeya marka la eego kiiloomitir ay dabooleen basaska. Marka waa inaan helnaa waaya aragnimada ugu badan, khaladka ugu yar. Waxaan xitaa dooran karnaa gaari u dhow khalad. Waxaan heysanaa sababo, markaan dooraneyno gaari. Marka lagu daro taxadarka iyo gawaarida bii'ada ee bey'ada yareynaysa qiiqa kaarboonka, su'aalaha maanta jira waxaa ka mid ah isticmaalka shidaalka, dabcan awooda rakaabka, iyo gaar ahaan, raaxada rakaabka, kuleylka iyo qaboojinta. Waxaan weydiineynaa taas. Asxaabteena farsamada ayaa isweydiinaya. Waxaan rabaa inaan la kulmo gaari walba inta aan awoodo. Ka dib oo dhan, waxaad go aansataa adigoo matalaya 16 milyan oo qof. Khaladaadka qaar ayaa hore loo sameeyay. Nasiib darrose, malaayiin rodol oo gaadiid ah ayaa ku xareeyay bakhaarka. Kuwaani waa khaladaad waaweyn. Khaladaad fudud ma ahan. Waxaad isticmaaleysaa lacagta dalka. Uma iibsatid gaari dhadhamintaada. Ixtiraamkaas, waxaan sameyn doonaa go'aan sax ah. Waqti ayaan ku dhaafnay. Runtii soo dhaweynta baska waxaa ku dhacay dayac ku yimid cusboonaysiinta magaalada Istanbul. Waqtigaan la joogo, gawaaridayadu waxay u adeegayaan masaafo aad u dheer. Waxaan ubaahanahay inaan sida ugu dhakhsaha badan u raaxeysto. Waxaan ku jirnaa xadkooda ugu dambeeya. Maalmaha soo socda, waa inaan go'aan gaarno oo aan baxnaa. Sababtoo ah gawaaridaasi kama joogsadaan bakhaarka warshad kasta. Waxay leeyihiin wax soo saar iyo waqti hogaamineed. Marka loo eego arrimahan oo dhan, waxaan rabnaa inaan go'aan deg deg ah qaadno. Qalad ma sameyn karno. Raaxo sare, qiimaha ugu yar iyo qiimaha ku saleysan sanado badan, sidoo kale waxay ku xiran tahay dareenka deegaanka. Anaga oo ku darin fikradahan oo dhan, waxaan gaari doonaa go'aanka saxda ah.
"WAA INAAN KU BADBAADIN KARO GUUD"
Immisa iibsi bas ayaa la qorsheeyay? Miyaa loo qaadaa sinnaan mise amaah?
Waxaa jira qaabab maaliyadeed oo kala duwan. Waxaan ula jeedaa hufnaan Fadhiisan maysid oo xisaabtan waxyaabahaas ku kacaya maalinta koowaad. Tusaale ahaan, waxaad sameyneysaa koonto 10-sano ah. Isaga ayaa daryeelaya. Waxaan rabnaa inaan halkaas isku aamino. Waxaa jira hab lagu keydiyo isticmaalka shidaalka. Tani waxay hoos u dhigaysaa qiimahaaga. Dhammaan kuwanu waa xisaabaad maalgelin wanaagsan. Isla mar ahaantaana, dadka khibradda u leh tikniyoolajiga gawaarida waxay u baahan yihiin fikir guud. Halkan, sidoo kale, waxaan ku dhaqmi doonnaa si caqli gal ah isla markaana go'aan looga gaaro.
"WAAN KU FAHAN TAHAY SHAQADA"
“Metrobus waa hab gaadiid oo mawduuca laga wada hadlayo. Waxay nolosheena sahlaysaa waana dhibaato weyn. Sidee gawaarida cusub u xallin doonaan dhibaatooyinka ku jira mitirka?
Halkan waxaan ka wada hadli doonaa teknolojiyad dheeri ah oo aanan ku saxnayn inaan hadda ka hadalno hadda. Waxaan ku haysannaa madaxyadeena. Maxaan u idhi maya? Waqti xaadirkan waxaa jira saldhigyo sharciyeed, oo u furan wadahadal iyo wixii la mid ah Waxaan ka warqabnaa in BRT dhab ahaantii culeys saaran yahay. Maxaa taa u fududayn doona? Maalgashiga Metro. Ahmiyadaha Istanbul. Waa maxay maalgashiga metro? Tusaale ahaan, waxaan u maleyneynaa in xitaa tareenka ka shaqeyn doona sanadkaan inta u dhaxeysa Mecidiyeköy iyo Mahmuybey ay si weyn u fududeyneyso dariiqa metrobus. Tusaale ahaan, khadka İncirli-Beylikdüzü. Wuxuu ku yaal shelf sanado. Waxaan rabnaa inaan fadhiisano oo aan wada hadalno si dhakhso leh. Sidoo kale, waxaan khadka ka leenahay Mahmutbey, oo khuseeya galbeedka Istanbul, illaa Esenyurt, oo aan damacsan nahay inaan ku biirno mitirka Beylikdüzü. Qandaraas ayaa la qabtay, laakiin nasiib darro wax mashruuc ah ma jirin. Waxaan ka shaqeynaa isaga. Hordhaca habraacyadan waa 3-4 sano. Laakiin marka la eego BRT, malahayga ayaa ah in marka khadadani ay shaqeynayaan, shuruudaha BRT si weyn ayey hoos ugu dhici doonaan. Ka dib markaa aan ka fikirno sidii caadiga ahayd ee dariiqa transit-ka ama caadi ahaan la doorbido, waxay isu rogi doontaa qaab xariiq. Tani waxay aad uga waxtar badan tahay. Waxaan xallinaa maanta, laakiin dhinacayagu, waxaan ka fikirnaa 3 sano, 5 sano, 10 sano. Khadkan, waxaan ku heli doonnaa xalal anagoo dadka isku keenaya marinka dhulka hoostiisa intii suurto gal ah. Laakiin khadkaani wuxuu sii wadi doonaa ilaa inta loo baahan yahay. Waa inaan ka wada hadalnaa xilligan, laakiin sidoo kale 5 sano, 10 sano, xitaa 20 sano. Waa inaan qorsheynno mustaqbalka Istanbul ee dareenkan si aynaan u la kulmin wax la yaab leh iyo go'aanno siyaasadeed. Go'aanno siyaasadeed ayaa la gaadhay kahor. Qorsheynta koowaad waxay ahayd tusaale ahaan Avcılar-Topkapı. Aynu ku darno tan, aynu ku darno tan. Waxqabadka lama tixgelin. Haddii waqtiga lumay halkaas lagu xallin lahaa maalgelin kale, laga yaabee looma baahna. Tusaale ahaan, haddii khadka 'İncirli-Beylikdüzü metro line' ee loo ballanqaaday xilli kasta oo doorashada laga soo bilaabo 2003 hore ayaa loo dhisay, qadkaan lama tixgelin lahaa. Tusaale ahaan. Waxaas oo dhami waa meel loogu talagalay baahiyaha qorshaynta mustaqbalka ee geedi socodka. Arrinkan waa la dayacay. Hada waxaan markasta u eegnaa iyaga xalka maanta laakiin berrito sidii xalka muddada dheer.
Miy ma ku soo gabagabeyn karnaa in khadka BRT la dheereyn doono? ”
Extended. Laakiin maxaa la kordhiyaa? Waxaa laga yaabaa in gargaarka halkaan lagu xallin karo baahidaas. Waxaan dhagaysannay baahida labada Silivri iyo Büyükçekmece. Sidee ayaan u xallin karnaa si dhakhso leh? 'Express Express work,' Waxaan u sheegay IETT. Khadka toosan u xawaare si dadka si deg deg ah loogu qaado dadka metrooga ah. Waqtiyada qaar ee maalinta ama bilaha, waxaa jira safar aad u hooseeya. Tusaale ahaan, waxaa jira farqiga safarka 5-6-laab ah ee u dhexeeya xilliga qaboobaha iyo xagaaga. Annaga oo tixgalineyna arrimahan oo dhan, 'Xariiqyada khadadka ayaa laga yaabaa' ayaanu nidhi. Waan la soconaa in ku shaqeynta sayniska oo aan ku jirin shay-baaris ay u roon tahay labada muwaadin iyo Istanbul.
Turkey ayaa intooda badan raadiyey gaari Gaadiidka 'Metro' Qabtay
Ku dhawaaqida qandaraaska: Mesh tarpaulin daabacaadda iyo meesha laalaaday (Ankara,…
Antalya Sarusu Tünektepe Mashruuca Qalabka Cabirka Telefoonka ee Mar labaad
Bandhiga İzmir Retro wuxuu albaabada u furay dadweynaha mar labaad marinka Alsancak
Aziz Kocaoglu, Metro ayaa sheegay in aan isbedelayno
Guryaha tuugada ah ayaa ku dhuumanaya tareenka!
Sii wad qabashada IZBAN iyo Metro
Awood uma leh in ay gaaraan Isban iyo Metro
Tirada Hoosudhka Waddooyinka ee Waaweyn ee IZBAN iyo Metro
Khadadka IETT Express
Linencirli Beylikdüzü metro line
Xarunta Tareenka ee Beylikdüzü
Beylikdüzü TÜYAP Metrobus boosteejadii ugu dambeysay
Mecidiyeköy Mahmuybey xarunta tareenka dhulka hoostiisa
qalabka tijaabada metrobus